Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.2.1 Galaxy Zoo
Ny Galaxy Zoo dia nampifandray ny ezak'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tsy manam-pahaizana maro mba hametrahana galaxy iray tapitrisa.
Ny Galaxy Zoo dia nitombo tamin'ny olana natrehan'i Kevin Schawinski, mpianatra nahazo mari-pahaizana momba ny Astronomia tao amin'ny Oniversiten'i Oxford tamin'ny taona 2007. Vetivety dia nahaliana ny Galaxies ny Schawinski, ary ny galaxies dia azo sokajiana amin'ny morphologie-elliptical na spiral-and amin'ny loko manga na mena. Tamin'io fotoana io, ny fahendren'ny mahazatra teo amin'ireo astronoma dia ny vahindanitra volontany, toy ny Milky Way, dia manga ny lokony (manondro tanora) ary ny vahindanitra elliptical dia mena (mampiseho ny fahanterana). Nisalasala ity fahendrena fahendrena ity i Schawinski. Niahiahy izy fa raha toa ka mety amin'ny ankapobeny io fomba fanao io, dia mety misy fisehoan-javatra maromaro maromaro, ary amin'ny fandalinana ny halavan'ity vahindanitra tsy mahazatra ity-ireo izay tsy nifanaraka tamin'ny lamin'asa takiana-dia afaka mianatra zavatra momba ny dingana galaxies niorina.
Noho izany, inona no nilain'i Schawinski mba handravana ny fahendrena mahazatra dia vondron'olon-galaxies maromaro; izany hoe ny vahindanitra izay naverina ho toy ny spiral na elliptical. Ny olana anefa dia ny hoe ny fomba algorithmika efa misy ho an'ny sokajy dia mbola tsy ampy tsara ho an'ny fikarohana siantifika; Amin'ny teny hafa, ny sokajy ho vahindanitra dia tamin'izany fotoana izany dia nisy olana izay sarotra tamin'ny ordinatera. Noho izany, inona no nilaina dia maro ny olona -classified vahindanitra. I Schawinski dia nanao ity olan'ny fanoratana ity tamin'ny hafanam-pon'ilay mpianatra nahazo diplaoma. Tamin'ny fotoam-pihetsika marathon nandritra ny fito andro naharitra 12 andro dia afaka nametraka vahindanitra 50.000 izy. Raha misy feo goaika dia mety ho toy ny betsaka, fa ny 5% amin'ny galaxia efa ho iray tapitrisa eo ho eo no nalain'ny Sloan Digital Sky Survey. Takatr'i Schawinski fa mila fomba maika kokoa izy.
Soa ihany, raha ny fandehany fa ny asa ny classifying vahindanitra tsy mitaky nandroso fiofanana amin'ny astronomia; dia afaka mampianatra ny olona hanao izany tsara tarehy haingana. Amin'ny teny hafa, na dia classifying vahindanitra dia asa izay Mafy ordinatera, dia mora ho an'ny olona tsara tarehy. Noho izany, raha mbola nipetraka teo amin'ny Pub any Oxford, Schawinski sy ny mpiara-astronoma Chris Lintott nanonofy ny tranonkala izay mpiasa an-tsitrapo no manasokajy sary ny vahindanitra. Volana vitsivitsy tatỳ aoriana, Galaxy Zoo teraka.
Ao amin'ny vohikalan'ny Galaxy Zoo, ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia hiasa mandritra ny minitra vitsy; Ohatra, ny fianarana ny fahasamihafana eo amin'ny vahindanitra sy ny galaxa (sary 5.2). Taorian'io fampiofanana io, ny mpilatsaka an-tsitrapo tsirairay dia tsy maintsy nandalo fitsikerana tsotra fotsiny tamin'ny fizarana 11 galaxies tamin'ny 15 niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana fanta-daza-ary avy eo dia hanomboka marina ny fananganana galaxies tsy fantatra amin'ny alàlan'ny endritsoratra tsotra (sary 5.3). Ny tetezamita avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny astronoma dia hitranga ao anatin'ny 10 minitra ary tsy maintsy mandalo fotsiny ny fihodinana ambany indrindra, tsotra fotsiny.
Sary 5.2: Ohatra amin'ny karazana vahindanitra roa: ny spiral ary ny elliptical. Ny tetikasa Galaxy Zoo dia nampiasa mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 100.000 mba haka sary maherin'ny 900,000. Nahazoana alalana avy amin'ny http://www.GalaxyZoo.org sy ny Sloan Digital Sky Survey .
Sary 5.3: Sary fanoratana izay nilain'ireo mpiasa an-tsitrapo hametraka sary iray. Vokatry ny fahazoan-dàlana avy amin'i Chris Lintott vokatry ny sary avy amin'ny Sloan Digital Sky Survey .
Nahasarika ny mpilatsaka an-tsitrapo voalohany ny Galaxy Zoo taorian'ny tetikasan-tsarimihetsika tao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny vaovao, ary ny enim-bolana dia nitombo ny tetikasa mba hampidirana mpahay siansa maherin'ny 100.000, olona nandray anjara noho izy ireo nankafy ilay asa ary te hanampy izy ireo hanohana ny astronomia. Miaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo 100.000 ireo, dia nanampy tamin'ny fanombanana mihoatra ny 40 tapitrisa izany, ary ny ankamaroan'ny kilasy dia avy amin'ny tarika madinika vitsivitsy (Lintott et al. 2008) .
Ireo mpikaroka izay manana traikefa amin'ny fampiasana ireo mpikaroka momba ny fikarohanam-pianarana dia mety tsy hisalasalana avy hatrany momba ny kalitaon'ny data. Raha toa ka azo itokisana io fisalasalana io, ny Galaxy Zoo dia maneho fa rehefa voavoatra, miparitaka, ary mifangaro ny fanomezana an-tsitrapo dia afaka mamokatra vokatra tsara (Lintott et al. 2008) . Ny trosa manan-danja iray ho an'ny fametrahana ny olona hamorona ny angon-kalitao matihanina dia ny fanamafisana , izany hoe, manana ny andraikitr'izy ireo mitovy amin'ny ataon'ny olona maro samihafa. Ao amin'ny Galaxy Zoo, nisy ny sokajy 40 isaky ny galaxy; Ireo mpikaroka izay mampiasa ireo mpikaroka momba ny fikarohana amin'ny ambaratonga ambony dia tsy mahavidy velively ny haavon-tsakafo, ka noho izany dia tokony hiankin-doha bebe kokoa amin'ny kalitao tsirairay izy ireo. Izay tsy nananan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tamin'ny fampiofanana, dia nanolo-tena tamin'ny fanamafisana.
Na dia misy sokajy maromaro isaky ny vahindanitra aza, dia ny fampifangaroana ny isan'ny sokajy mpirotsaka an-tsitrapo hamolavola ny fananganana fifaninanana dia sarotra. Satria ireo fanamby mitovy amin'izany dia mitranga amin'ny tetikasa fanatanterahana ny olombelona, ​​dia manampy amin'ny famerenana fohifohy ny dingana telo nataon'ireo mpikaroka ao Galaxy Zoo mba hamokarana ny fepetran-keviny. Voalohany, ireo mpikaroka dia "nanadio" ny angon-drakitra tamin'ny alàlan'ny fanesorana ny sokajy diso. Ohatra, ireo olona izay naverina naverina imbetsaka ny vahindanitra iray-zavatra izay hitranga raha toa ka manandrana manova ny vokatra izy ireo-dia nesorina ny fanasan-dry zareo. Ity sy ny fanadiovana hafa mitovy amin'izany dia nesorina manodidina ny 4% amin'ny sokajy rehetra.
Faharoa, taorin 'ny fanadiovana, ireo mpikaroka dia nila nesoriny ny fanosihosena teo amin' ny kilasy. Tamin'ny alalan'ny andiam-panadihadiana maromaro hita tao anatin'ny tetikasa tany am-piandohana - ohatra, dia mampiseho mpilatsaka an-tsitrapo sasany ny vahindanitra amin'ny monochrome fa tsy loko - ireo mpikaroka dia nahita fomba fiasa maromaro, toy ny vahaolana ara-pitsipi-pitenenana mba hametrahana ny vahindanitra ho an'ny vahindanitra ho galaxies ho an'ny sela (Bamford et al. 2009) . Ny fampifanarahana amin'ireo fisainan-javatra ireo dia tena zava-dehibe satria satria tsy manala azy amin'ny fomba ofisialy ny fanamafisana; Manampy ihany izy io dia manala ny fahadisoana mety.
Farany, taorian 'ny fanombohana, ireo mpikaroka dia nila fomba iray hampiarahana ny sokajy tsirairay mba hametrahana ny fananganana fifaninanana. Ny fomba tsotra indrindra hampifangaroana ny sokajy ho an'ny vahindanitra tsirairay dia tokony nifidy ny fananganana ankapobeny. Na izany aza, io fomba fiasa io dia nanome ny lanjan'ny mpilatsaka an-tsitrapo tsirairay, ary niahiahy ireo mpikaroka fa ny mpirotsaka an-tsitrapo sasany dia tsara kokoa noho ny hafa. Noho izany, ny mpikaroka dia namolavola fomba fitrandrahana sarotra kokoa izay nanandrana ny hamantatra ireo kilasy tsara indrindra ary hanome azy ireo lanja bebe kokoa.
Noho izany, taorian'ny dingana telo dingana-fanadiovana, fanombohana ary ny lanjany-dia niova 40 tapitrisa ny fanoloran-tena an-tsitrapo tao amin'ny ekipa mpikaroka ao amin'ny Galaxy Zoo ho an'ny vondrona consensus morphological classifications. Rehefa nampitahaina ireo fomban'ny Galaxy Zoo tamin'ny tetika telo kely teo aloha nataon'ireo astronoma matihanina, anisan'izany ny fanasokajian'i Schawinski izay nanampy tamin'ny fanentanana ny Galaxy Zoo, dia nisy fifanarahana matanjaka. Araka izany, ireo mpilatsaka an-tsitrapo, miaraka amin'ny vondrona, dia afaka manome sokajy avo lenta sy amin'ny ambaratonga tsy azon'ny mpikaroka (Lintott et al. 2008) . Raha ny marina, amin'ny fananana sokajin'olona ho an'ny vahindanitra maro toy izany, i Schawinski, Lintott ary ny hafa dia afaka mampiseho fa eo amin'ny 80% -n'ny vahindanitra no manaraka ny endrika efa tadiavina-ny manga sy mena ary ny mena midorehitra-ary taratasy maro no nosoratana momba izany ity discovery ity (Fortson et al. 2011) .
Azonao atao ny mahita ny fomba fijerin'ny Galaxy Zoo araka ny fomba fitahirizana sombin-dika mifangaro, mitovy amin'ny fomba ampiasaina amin'ny tetikasa fanatsarana ny olombelona. Voalohany, lehibe Nizara roa ny olana dia chunks. Amin'io tranga io, ny olana amin'ny fametrahana vahindanitra iray tapitrisa dia nizara ho olana iray tapitrisa amin'ny fametrahana vahindanitra iray. Avy eo dia misy ampiharana ampiharina amin'ny sehatra tsirairay. Amin'io tranga io, ireo mpirotsaka an-tsitrapo dia nisafidy ny vahindanitra tsirairay avy na ho toy ny spiral na elliptical. Farany, ny voka-pifidianana dia mifamatotra amin'ny famolavolana voka-pifanarahana. Amin'io tranga io, ny dingana iraisana dia nahitana ny fanadiovana, ny fanodikodinana, ary ny lanjany mba hametrahana ny fananganana consensus ho an'ny vahindanitra tsirairay. Na dia ampiasain'ny ankamaroan'ny tetikasa io karazan-tserasera io aza, ny dingana tsirairay dia tokony atao mifanaraka amin'ny olana atrehina. Ohatra, ao amin'ny tetikasa fanatanterahana ny olombelona, ​​etsy ambany, ny karazan-tsakafo iray ihany no hanaraka, fa ny fampiharana sy ny fampifangaroana ny dingana dia tena hafa.
Ho an'ny ekipan'ny Galaxy Zoo, ity tetikasa voalohany ity dia fiandohana. Vetivety dia takatr'izy ireo fa na dia afaka mampiaraka amin'ny vahindanitra maherin'ny iray tapitrisa aza izy ireo dia tsy ampy ny miara-miasa amin'ny fanadihadian'ny lanitra malaza, izay afaka mamokatra sary avy amin'ny vahindanitra 10 miliara (Kuminski et al. 2014) . Mba hiatrehana ny fitomboan'ny 1 tapitrisa ka hatramin'ny 10 lavitrisa - ny mety ho 10,000-Galaxy Zoo dia mila mamerina mpandray anjara 10 000 heny. Na dia lehibe aza ny isan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Internet, dia tsy misy fetra. Noho izany, ireo mpikaroka dia nahatsikaritra fa raha toa ka handefa ny angon-drakitra tsy mitsaha-mitombo hatrany izy ireo, dia ilaina ny fanampiana vaovao iray, izay mbola manalefaka kokoa.
Noho izany, Manda Banerji - miara-miasa amin'i Schawinski, Lintott, ary mpikambana hafa ao amin'ny tarika Galaxy Zoo (2010) - solosaina mpampianatra nohavaozina mba hametraka ny vahindanitra. Amin'ny endriny manokana, amin'ny fampiasana ny sokajin'olombelona noforonin'ny Galaxy Zoo, Banerji dia nanamboatra modely fianarana milina izay afaka maminavina ny sokajin'olombelona ho vahindanitra mifototra amin'ny toetran'ny sary. Raha toa ka afaka mamerina ny mari-pahaizan'ny olombelona amin'ny fomba marina tsara io modely io, dia azo ampiasaina amin'ny mpikaroka Galaxy Zoo izy ireo mba hametrahana vondron'olona vitsy an'isa tsy misy fetra.
Ny ivon'ny Banerji sy ny fomba fijerin'ny mpiara-miasa dia tena mitovy amin'ireo fomba fampiasa matetika amin'ny fikarohana ara-tsosialy, na dia tsy dia mazava loatra aza io fitoviana io amin'ny voalohany. Voalohany, i Banerji sy ireo mpiara-miasa dia niova fo ny sary tsirairay tamin'ny endri-tsoratra rehetra izay namintina ny fananany. Ohatra, ho an'ireo sarin'ny vahindanitra, dia mety misy karazany telo: ny haben'ny manga eo amin'ny sary, ny fisavana amin'ny hamamin'ny pixel, ary ny ampahany amin'ny pixel tsy fotsy. Ny fisafidianana ireo singa tsara dia ampahany manan-danja amin'ny olana, ary matetika dia ilaina ny fahaiza-manaon'ilay subject. Ity dingana voalohany ity, izay antsoina matetika hoe engineering , dia miteraka matrices iray miaraka amin'ny andalana iray isaky ny sary ary avy eo andalana telo mamaritra io sary io. Ny mpikaroka dia mamorona modely momba ny statistika na milina-ohatra, ny famerenana ny logistika-izay maminavina ny sokajin'olona izay mifototra amin'ny endri-javatra ny sary. Farany, ny mpikaroka dia mampiasa ireo mari-pamantarana ao amin'io modely statistika io mba hamokarana ny vondron'ny vahindanitra vaovao (sary 5.4). Amin'ny fianarana milina, io fomba fitsaboana io dia ny fiantsoana ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana ohatra noforonina hamoronana modely izay afaka manisy rakitra vaovao.
Sary 5.4: Famaritana tsotra momba ny fomba i Banerji et al. (2010) nampiasa ny sokajy Galaxy Zoo mba hampiofanana modely fianarana milina hanaovana ny fananganana galaxy. Ny sarin'ny vahindanitra dia niova fo tao anatin'ny endri-javatra. Amin'ity ohatra simba ity dia misy endri-javatra telo (ny habetsahan'ny manga eo amin'ny sary, ny fisavana amin'ny hamamin'ny pixel, ary ny ampahany amin'ny pixel tsy misy hadisoana). Avy eo, ho an'ny ampahany ny sary, ny labels Zoo Galaxy dia ampiasaina hanofanana modely fianarana milina. Farany, ny fianarana milina dia ampiasaina mba handinihana ny sokajy ho an'ny vahindanitra sisa. Miantso an'ity tetikasa fanangonan-kevitry ny solosaina ity aho, fa tsy mamela olana amin'ny olona, ​​fa ny olombelona kosa mamorona daty iray izay azo ampiasaina hampiofanana solosaina hamaha ilay olana. Ny tombony amin'ity rafitra fanaraha-maso ny solosaina ity dia ahafahanao miara-manamboatra data tsy misy dikany amin'ny fampiasana afa-tsy ezaka firy amin'ny olombelona. Sary nalaina avy amin'ny Sloan Digital Sky Survey .
Ny endri-javatra ao amin'ny Banerji sy ny modely fianarana ny fiara dia sarotra kokoa noho ireo tao amin'ny ohatra asehoko-ohatra, nampiasa ny endriny toy ny "de Vaucouleurs fitoviana fitoviana" - ary ny modely dia tsy fitetezana ny logisticion, dia tambajotra an-tserasera. Amin'ny fampiasana ny endri-tsainy, ny modely nataony, ary ny fepetra takian'ny Galaxy Zoo, izy dia afaka namorona ny vatomizana amin'ny endri-javatra tsirairay, ary avy eo dia ampiasao ireo lanjany ireo mba hampahafantarana momba ny fametrahana ny vahindanitra. Ohatra, ny fandinihany dia nahatsikaritra fa ny sarin'ny "Vaucouleurs ambany" dia mety ho vahindanitra volontany. Noho ireo vato ireo, dia afaka naminavina ny sokajin'olona ho an'ny vahindanitra izy, araka ny tokony ho izy.
Ny asan'i Banerji sy ny mpiara-miasa dia nitodika ny Galaxy Zoo mba hiantso ny ordinatera mpanampy amin'ny solosaina amin'ny ordinatera . Ny fomba tsara indrindra hieritreretana ireo rafitra ireo dia ny hoe tsy mamaha olana amin'ny olombelona ny olona, ​​fa ny olona kosa mamorona daty iray izay azo ampiasaina hanofanana solosaina hamaha ilay olana. Indraindray, ny fanofanana solosaina hamaha ilay olana dia mety mitaky ohatra marobe, ary ny fomba tokana ahafahana mamokatra ohatra maromaro dia fiaraha-miasa marobe. Ny tombony amin'ity fomba fiasa amin'ny ordinatera ity dia ny mamela anao handrindra ny angon-drakitra tsy misy fetrany amin'ny fampiasana afa-tsy ezaka firy amin'ny olombelona. Ohatra, ny mpikaroka iray misy vahindanitra misy vondron'olona vitsy an'isa dia afaka manamboatra modely manara-penitra izay azo ampiasaina hanasokajiana an'arivony tapitrisa na dolara telo tapitrisa. Raha misy vahindanitra goavam-be, dia io karazana olona io ihany no vahaolana tokana. Tsy azo atao anefa ny manatsara ny toetr'andro. Ny fametrahana modely fianarana milina izay afaka mamolavola araka ny tokony ho izy ny sokajin-dehilahy dia olana tena sarotra, saingy sambatra ny efa manana boky tsara ho an'ity lohahevitra ity (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2009; Murphy 2012; James et al. 2013) .
Galaxy Zoo dia ohatra tsara momba ny firoboroboan'ny tetikasa fanatanterahana ny olombelona. Voalohany, ny mpikaroka dia manandrana ny tetikasa amin'ny tenany manokana na miaraka amin'ny ekipa mpikaroka fikarohana (ohatra ny ezaka fanoratana voalohany an'i Schawinski). Raha toa ka tsy mahomby tsara ity fomba ity dia afaka mifindra amin'ny tetikasa fanatanterahana olona miaraka amin'ny mpandray anjara marobe ny mpikaroka. Saingy, ho an'ny antontam-baovao maromaro dia tsy ampy ny ezaka ataon'ny olombelona madio. Amin'izay fotoana izay, ny mpikaroka dia mila manangana rafitra mpanampy amin'ny solosaina amin'ny ordinatera izay ampiasaina amin'ny sokajin'olona mba hampiofanana modely fianarana milina izay azo ampiharina amin'ny antontam-baovao tsy voafetra.